Indlela yokulima kunye nokudibanisa imifanekiso - ii-Geofumadas
Indlela yokulima nokudibanisa imifanekiso
Ngo-Okthobha, 2008 Microstation-Bentley
Oku kuphuma njengento efunekayo kwikhosi kutshanje endikunike yona I-Microstation kunye neNkcukacha, nantsi isishwankathelo sendlela:
Ndine umfanekiso ophantsi weGoogle Earth, endiyifumene negooreferenced kwaye ndifuna ukuyinqumla ngokusekelwe kwipolygoni emele ukongezwa kwendawo yokuhlala kwidolophu yokuhlaliswa kwabantu. Emva koko ndifuna ukudibanisa nomfanekiso ophezulu wegrey ukuba ndinesisombululo esincinci kodwa loo mfanekiso omnye xa ugcina imibala phambi.
Kule meko ndiya kusebenzisa i-Microstation Descartes, efana ne-AutoCAD Raster Design okanye into esaziwayo njengeNgqonge. Ukuba izixhobo ze-Descartes azibonakali, "izixhobo / iibhokisi zeethuluzi" zenziwe kwaye iphaneli ye "Descartes Raster Control" isebenze.
1 Sika umfanekiso osekelwe kwi-polygon.
Emva kokuba ndinepolygoni, ndisebenzisa umyalelo othi "imifanekiso yendlela", icela ipoloni yokusika, ngoko ndiyayikhetha ngokucofa ngesimo esimnyama.
Emva koko, xa ukhetha ukwesibini, isikrini sibonakala ndibuza:
yiyiphi imifanekiso enqwenela ukuyinquma
kwindlela yokuya kuyo
Ukuba ndifuna ukungafihli ekuhlaleni
Ngokungagqibekanga ndibeka ubukhulu beepikseli ezikulo mfanekiso kodwa ndingaziguqula.
Emva koko umyalezo ubonakala kwikona eqhutywayo kwaye ekugqibeleni umfanekiso wesalathisi uvela. Ngomphumo ubona, ukuba umbala umbala unqunywe, ngokucacileyo konke ukuze ndibone umfanekiso kwi-grayscale back.
2 Hlanganisa zombini imifanekiso
Ngoku into endiyifunayo kukuba zombini imifanekiso yokwenza enye, ngoko ndenza umlo wendawo endifuna ukuyifumana, kwaye ndisebenzisa "ukudibanisa imifanekiso". Uya kundibuza into efanayo nomyalelo wangaphambili, ngokwahlukileyo ukuba kulo mzekelo andizange ndibonise nganye imifanekiso kodwa kunoko "umyinge" ongakhetha kuzo kokubili.
Kwaye, bafazi kunye nenceba, yibona indlela enhle ngayo, yenze umfanekiso kunye bobabini.
Awu, ukuba benze oku, kufuneka ukuba ube nephepha-mvume okanye Microstation Descartes, yokuthumela Bentley disk ukuba yiya kwiphepha lakho le Khetha ukhetho CD ikunika 15 imizuzu ... ndenze uye endiwazuze 11.
Bentley Systems Umhlaba ka-Google GIS asibonise
Post edlulileyo«Edlulileyo XII Intlanganiso yeGeographers yaseLatin America
Post Next Iikhukhi zezixhobo ze-AutoCAD Imephu ye3D 2009Okulandelayo "
Enye Impendulo "Indlela yokuhlaziya kunye nokudibanisa imifanekiso"
JAIME SANCHEZ uthi:
NDIFUNA UNcedo, NDENZE UMZEKELISO OTHUNYIWEYO OVELA KWI-AUTOCAD CIVIL 3D 2012, NGOKUXHUMANA NOKUGQIBELA, OKO KUDINGAXELANI NAM UKUZE NDENZE ISAHLUKO NDINGAFUNI UKWENZA, NDINGAZI UKUBA NDINGAYENZI NJANI,